China Ferrite Igwe Ọdụdọ ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Rumotek
Ike ferrites dabere na barium ferrite na strontium powders (chemical usoro BaO • 6Fe2O3 na SrO • 6Fe2O3) arụpụtara. Ha na-agụnye ọla ndị na-ekpo ọkụ, si otú a na-esonye na otu ihe ndị nwere seramiki. Ha nwere ihe ruru. 90% iron oxide (Fe2O3) na 10% alkaline earth oxide (BaO ma ọ bụ SrO) - akụrụngwa nke bara ụba ma dị ọnụ ala. Ha na-ekewa n'ime isotropic na anisotropic, a na-eme ka akụkụ ahụ dị na otu
Ntụziaka nke na-enweta njirimara magnetik ka mma. A na-eji ihe ndị na-eme ka ihe dị iche iche na-eme ka a na-eme ka ihe ndị dị na anisotropic dị na ndọta. Nke a na-enye ihe ndọta na-ahọrọ ụzọ na triples ume ume ya.
Emebiri Igwe Ọdụdọ Ferrite Njirimara nke anu aru
Ọkwa Nchegharị Rev. Temp. Coeff. Nke Br Ike mmanye Nnukwu Ike mmanye Rev. Temp.-Coeff. Nke Hcj Max. Ngwaahịa Ike Max. Operating okpomọkụ Njupụta
Br (KGs) Hcb (KOe) Hcj (KOe) (BH) kacha. (MGOe) g / cm
Y10T 2.0-2.35 -0.20 1.57-2.01 2.64-3.52 +0.30 0.8-1.2 250 ℃ 4,95
Y20 3.2-3.8 -0.20 1.70-2.38 1.76-2.45 +0.30 2.3-2.8 250 ℃ 4,95
Y22H 3.1-3.6 -0.20 2.77-3.14 3.52-4.02 +0.30 2.5-3.2 250 ℃ 4,95
Y23 3.2-3.7 -0.20 2.14-2.38 2.39-2.89 +0.30 2.5-3.2 250 ℃ 4,95
Y25 3.6-4.0 -0.20 1.70-2.14 1.76-2.51 +0.30 2.8-3.5 250 ℃ 4,95
Y26H 3.6-3.9 -0.20 2.77-3.14 2.83-3.21 +0.30 2.9-3.5 250 ℃ 4,95
Y27H 3.7-4.0 -0.20 2,58-3,14 2.64-3.21 +0.30 3.1-3.7 250 ℃ 4,95
Y28 3.7-4.0 -0.20 2.20-2.64 2.26-2.77 +0.30 3.3-3.8 250 ℃ 4,95
Y30 3.7-4.0 -0.20 2.20-2.64 2.64-2.77 +0.30 3.3-3.8 250 ℃ 4,95
Y30H-1 3.8-4.0 -0.20 2.89-3.46 2.95-3.65 +0.30 3.4-4.1 250 ℃ 4,95
Y30BH 3.8-3.9 -0.20 2.80-2.95 2.90-3.08 +0.30 3.4-3.7 250 ℃ 4,95
Y30-1 3.6-4.0 -0.20 1.70-2.14 1.76-2.51 +0.30 2.8-3.5 250 ℃ 4,95
Y30BH-1 3.8-4.0 -0.20 2.89-3.46 2.95-3.65 +0.30 3.4-4.0 250 ℃ 4,95
Y30H-2 3.95-4.15 -0.20 3.46-3.77 3.90-4.21 +0.30 3.5-4.0 250 ℃ 4,95
Y20-2 3.95-4.15 -0.20 3.46-3.77 3.90-4.21 +0.30 3.5-4.0 250 ℃ 4,95
Y32 4.0-4.2 -0.20 2.01-2.38 2.07-2.45 +0.30 3.8-4.2 250 ℃ 4,95
Y33 4.1-4.3 -0.20 2.77-3.14 2.83-3.21 +0.30 4.0-4.4 250 ℃ 4,95
Afọ 35 4.0-4.1 -0.20 2.20-2.45 2.26-2.51 +0.30 3.8-4.0 250 ℃ 4,95
· Anyị na-anọgide na otu dị ka ọ gwụla ma akọwapụtara ya n'aka ndị ahịa. Curie okpomọkụ na okpomọkụ ọnụọgụ bụ maka ntụnye naanị, ọ bụghị dị ka ihe ndabere maka mkpebi. · Oke kachasị arụ ọrụ nke magnet bụ mgbanwe n'ihi oke nke ogologo na dayameta na ihe gburugburu.
Dị ka a na-ahụkarị nke oxide ceramik, ihe siri ike magnet na-egosipụta omume na-eguzogide ọgwụ na mmiri, ihe mgbaze, ngwọta alkaline,
adighi ike acid, salts, mmanu mmanu na ikuku mmiri. N'ozuzu, a ga-eji ihe ndị siri ike mee ihe na-enweghị nchebe nchebe ọzọ.
N'ihi oke ike ha (6-7 Mohs), ihe ndị dị na Ferrite na-agbawa agbawa ma na-echekwa ịkụ aka ma ọ bụ ikwe. N'oge nhazi, a ghaziri ha iji igwe diamond. Temperatureswe igwe na-arụ ọrụ na igwe ihe na-adịkarị n'etiti -40ºC na 250ºC.
A na-eji ụdị dị iche iche arụ ọrụ injinị, dị ka akpaaka na njikwa mmesho. Ngwa ndị ọzọ dị ka akụrụngwa eletriki Automobile (wipers, oche oche oche), Nkuzi, Ọnụ ụzọ, Igwe igwe Magnet na oche ịhịa aka n'ahụ, wdg.
Taa, ferrites siri ike na-anọchite ọnụ ọgụgụ kasịnụ nke magnet na-adịgide adịgide ewepụtara. N'adịghị ka ndị ndọta AlNiCo, a na-eji oke ume dị iche iche mara oke mmiri siri ike mana ike ike dị egwu. Nke a na-abụkarị ụdị ọdịdị nke ihe ndị ahụ. Barium ferrite na strontium ferrite dị iche iche dabere na mbido ihe.
Ekpebisiri ụkpụrụ niile ekwuru site na iji akara ngosi dị ka IEC 60404-5. Nkọwa ndị a na-eje ozi dị ka ụkpụrụ nrụtụ aka nwere ike ịdị iche.
Nke gara aga: Sintered NdFeB Igwe Ọdụdọ
Osote: SmCo Igwe Ọdụdọ
Ferrite Magnetik Assembly
Igwe Igwe Igwe Igwe Ferrite
Ferrite Ring Ọkà Okwu Igwe Ọdụdọ
N42 NdFeB Igwe Ọdụdọ
NdFeB Igwe Ọdụdọ